यी बलीउड फिल्महरु २०२० मा भए फल्प – Janapriyakhabar
यी बलीउड फिल्महरु २०२० मा भए फल्प
२०२० को सबैभन्दा घटिया नराम्रो फिल्म कुन हो? यस मामलामा सडक -2 फिल्म अव्वल रहन गयो । हालको अवस्थामा धेरै फिल्महरू रिलिज भएका छैनन् । तर,जुन-जुन फिल्म रिलिज भयो, त्यही फिल्मको आधारमा यी प्रश्नहरू सोधिएको थियो । तपाईंलाई कुुन फिल्म हो जस्तो लाग्छ ? के सडक -२ फिल्म यस मामलमा अव्वल रह्यो त ?
४२.५ प्रतिशत मानिसहरूले महेश भट्टद्वारा निर्देशित फिल्म सडक -2 लाई यस वर्ष २०२० को घटिया फिल्मको दर्जा दिएँ। सुशांत सिंहको मृत्यु पश्चात् नेपोटिज्मको बहस चलेको थियो । यसमा सडक2फिल्म मानिसहरू को नजरमा आएको थियो । यस मानिसहरूले यस फिल्मलाई डिस्लाइक गरेर ट्रेन्डिङ्मा पुराएर रेकड बनाएका थिए । जब फिल्म ओटीटीमा रिलीज भएको थियो । मानिसहरूले यस फिल्मलाई एकदम कम हेरेका थिए । त्यसमा पनि फिल्म एकदम खराब बनेको थियो । यस फिल्ममा संजय दत्त,आलिया भट्ट र आदित्य राय कपूर जस्ता स्टारहरू थिए ।
-कुली नम्बर वन
सडक -२ पछि “कुली नम्बर वन” फिल्म सबैभन्दा घटिया फिल्म सावित भयो । यस फिल्म लाई २१.४ प्रतिशत मानिसहरूले वोट गरेका थिए । वरुण धवन र सारा अली खान अभिनीत यस मूभिको निर्देशन डेविड धवनले गर्नुभएको थियो । फिल्म सिनेमाघरमा रिलिज हुने तयारी भएको थियो। तर,वर्तमान अवस्थालाई लिएर फिल्म सीधैैं ओटीटीमा नै जारी गरिएको थियो ।
-स्ट्रीट डांसर3डी
उक्त फिल्मको लिस्टमा तीन नम्बरको स्थानमा `स्ट्रीट डांसर3डी´ फिल्म रहेको छ । फिल्ममा वरुण धवन र श्रद्धा कपूर जस्ता स्टारहरू रहेका छन्। वरुण धवनको यो नराम्रो फिल्मको लिस्ट मध्येको यो दोस्रो फिल्म हो । यस फिल्मका डायरेक्टर रेमो डिसूजा हुन।
चौथो नम्बरमा अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म रहेको छ । दक्षिण भारतीय फिल्ममा अक्षय को साथमा किआरा आडवाणी थीए । हरर प्लस कमेडी का मिश्रण दर्शकहरूले खास मन पराएनन ।
-लव आज कल
फिल्मको लिस्टमा पाँचौ नम्बरमा इम्तियाज अली को मूभि ‘लव आज कल’ रहेको छ।जसमा कत्तिक कार्तिक आर्यन र सारा अली खान रहेका छन् । यो लव स्टोरी ले पनि खासै चर्चा पाएन ।
-इंदू की जवानी
छैठौं नंम्बरमा “इंदू की जवानी” फिल्म रहेको छ । किआरा आडवाणी ले निर्देश गरेका यस मुभि सिनेमाघर मा पनि रिलीज भयो । तर,नराम्रो तरिकाबाट फिल्म असफल रह्यो ।
बलिउडका यी नायिकाहरू जसले बि- ग्रेड फिल्ममा पनि काम गरे
रचना रिमाल र सुवास भुजेलको “हार-जीत” बोलको गीत सार्वजनिक